प्रभु बैंकमा ९ सय भन्दा बढि पत्रकारहरुको खाता नै असुरक्षीतः कहिले रकम होल्ड त कहिले खाता नम्बर परिवर्तन, कहिले रकम नै गायब ? - Aathikbazarnews.com प्रभु बैंकमा ९ सय भन्दा बढि पत्रकारहरुको खाता नै असुरक्षीतः कहिले रकम होल्ड त कहिले खाता नम्बर परिवर्तन, कहिले रकम नै गायब ? -
नेपालमा २७ वटा वाणिज्य बैंक सञ्चालित छन् । तर, बिना टेण्डर एउटा बैंंकले विगत १० वर्षदेखि ९ सय भन्दा बढि पत्रपत्रिकाका खातामा एकाधिकार जमाएको छ भन्दा पत्याउन गाह्रो होला । तर, यो सत्य हो । कथा किष्ट बैंक देखिको जब किष्ट बैंकलाई प्रभु बैंकले कौडीको मुल्यमा किष्ट बैंकको उच्च व्यवस्थापन टिम जेल भित्र भएको बेला हडप्न सफल भयो । त्यसपछि उसको एकछत्र राज किष्ट बैंकको भव्य महलमा शुरु भयो भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन ।
तत्कालिन किष्ट बैंकका सीइओ कमल ज्ञवलीले विदेशबाट अधिकाश मेट्रिरियल ल्याएर बनाएको त्यो भव्य अनामनगरको महलमा किष्ट बैंकको बोर्ड फ्याकी प्रभु बैंकको बोर्ड लगाएर सीइओ अशोक शेरचनले राज शुरु गरे ।
तत्कालीन किष्ट बैंकका सीइओ कमल ज्ञवलीले नेपाल सरकारको सूचना तथा प्रशारण विभागका तत्कालीन महानिर्देशकलाई केही दक्षीणा र उनीका आफन्त १ दर्जन कर्मचारी बैंकमा भर्ना गरि दिए र सबै प्रेस काउन्सिल नेपालबाट क, ख, ग, घ वर्गमा वर्गिकरण भएमा पत्रपत्रिकाहरुको खाता खोल्ने टेण्डर पाए । त्यो दायित्व अहिले प्रभु बैंकमा आएको छ ।
प्रेस काउन्सिल नेपालबाट वर्गिकरणमा परेका करिब ९ सय पत्रपत्रिकाहरुले अनिवार्य रुपमा प्रभु बैंकमा खाता खोल्नै पर्दछ । अरु २६ बैंकमा खाता भए पनि सूचना तथा प्रसारण विभागले लोककल्याणकारी विज्ञापनको पैसा दिदैन । विभागले एउटा पत्र दिन्छ । १ हजारमा खाता खोलिदिने बारे सो पत्रको आधारमा प्रभु बैंकले पत्रपत्रिकाको करेन्ट एकाउण्ट खोली दिने गर्दछ ।
सूचना तथा प्रसारण विभागले १ महिना वा ३ महिना वा ६ महिनामा ९ सय भन्दा बढि पत्रपत्रिकाको पैसा प्रभु बैंकको खातामा पठाईदिन्छ तर प्रभु बैंकले उक्त पैसा १ हप्ता देखि १५ दिनसम्म् होल्ड गर्ने गरेको पत्रकारहरुको गुनासो छ । ९ यस पत्रिकाको मासिक ३ करोड भन्दा बढि पैसा बिना व्याज १५ दिन होल्ड गरि चलाएको भेटिएको छ ।
अर्को अचम्मको कुरा के छ भने सूचना तथा प्रसारण विभाग किन अन्य बैंकको पत्रकारहरुको खातामा पैसा जम्मा गर्दैन । प्रभु नै किन चाहियो ? कारण हो विगत देखिको परम्परा र विगतकै दान दक्षिणा एक कर्मचारीले पंक्तिकारलाई बताए ।
प्रभु बैंकका सीइओ अशोक शेरचनलाई पत्रकारहरुले पैसा ढिलो आएको, १ हजारमा विभागकै सिफारिसमा खाता खोलीको तर, १० हजार होल्ड गरिएको र खातावालाई थाह नै नदिई खाता नम्बर परिर्वतन गरिएको गुनासो लिएर गए पनि सुनुवाई नगरेको म आफै भुक्तभोगी हुँ ।
जब कि सूचना तथा प्रसारण विभागको लेटरप्याडमै एकहजार रुपैयामा करेन्ट एकाउण्ट खोलि दिनु भन्ने पत्र प्रभु बैंकलाई दिए पनि खाता सञ्चालन पछि १० हजार खातामै होल्ड गरेर लुट मच्चाएको भेटिएको छ । यतिमात्रै होइन क वर्गको पैसा ख वर्ग ग वर्गको पैसा घ वर्गको पत्रपत्रिकाको खातामा राखेर रकम नै गायब गराएको देखिन्छ । यी र यस्ता कारणले ९ सय भन्दा बढि पत्रकारहरुको खाता प्रभु बैंकमा असुरक्षीत बन्दै गएको प्रस्टै देखिन्छ ।
केही महिना अगाडी प्रभु बैंकका सीइओ अशोक शेरचनको निर्देशनमा ९ सय पत्रकारहरुका खाता नम्बर सोध्दै नसोधी परिवर्तन गरिए र १ हजार ब्यालेन्समा खोलीएको खातामा १० हजार रोक्का गरियो । यो कस्तो बैकिङ्ग हो । गर्भनर साब ? प्रभु बैंकलाई कुनै छानवीन वा सोधपुछ पनि हुँदैन ?
भनिन्छ प्रभु बैंकका सीइओ अशोक शेरचन पनि किष्ट बैंकका सीइओ ज्ञावलीले बनाएको भवनमा बसी ज्ञावलीकै नियतको काम गर्दैछन् भन्दा चाहि फरक नपर्ला । प्रभु बैंकमा २ रुपैयाको अधिकार सीइओ बाहेक कसैलाई छैन । सबै उच्च कर्मचारी हली गोठालो जस्तै हुन्, भन्दा पनि फरक पर्दैन ।
अधिकार एकाधिकार गरि सोझा साझा कर्मचारलीलाई दवाउने काम भएपछि तत्कालीन डिपुटी सीइओ तारा मानन्धरले राजीनामा नै दिर गए । अन्य केही उच्च कर्मचारीहरुले बैंक छाडे । कर्मचारी माथी चर्को दमन पछि साना तहका सयौ कर्मचारहिरु अन्य बैंकमा पुगेका समाचार हामीलेनै लेखेका थियौ ।
प्रभु बैंकको चाइनिज पे–कार्ड ?
प्रभु बैंकले हालै जारी गरेको चीनबाट आयात गरिएको चाइनिज पे भिसा कार्डको कथा डरलाग्दो छ । राष्ट्र बैंकले एउटा एटिएमबाट अर्को बैंकको एटिएममा पैसा झिक्दा निशुल्क भनेको छ । तर, प्रभु बैंकको सो कार्डबाट ठूला नबिल, एनआईसी एशिया र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकमा चन्दैन । पैसा झिक्न मिल्दैन । यो कस्तो बैकिङ्ग हो ?
मंहगो शुल्क तिरी प्रभु बैंकले केही महिना अगाडी बजारमा ल्याएको यो कार्डले लकडाउन र निषेधाज्ञामा ग्राहकले सास्ती व्यहोर्नु पेरको हामी भुक्तभोगीहरुबाटै प्रष्ट देखिन्छ । सेवा राम्रो र चमत्कारी दिउ । पैसा लिउ । तर प्रभु बैंकले सधै ग्राहकलाई दुख दिने काम गरेको देखिन्छ । अरु ठूला २६ वाणिज्य बैंकका भिसा कार्ड सबै बैंकमा चल्ने गरेका छन् । विकास बैंकका एटिएम समेत चल्ने गर्दछ । तर, प्रभु बैंकको चल्दैन । यसको खोजी पनि हुनेनै छ ।
खराज कर्जा बढ्यो ?
केही समय यता निकै धेरै खराब कर्जाका साथ अघि बढेको बैंकले छोटो समयमै खराब कर्जालाई ५ प्रतिशत भन्दा मुनी झार्न सफल भएको थियो । तर, यस त्रैमासमा भने अलिकती फरक अवस्था देखियो । गत आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिकमा २.५१ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा अहिले भने यस त्रैमासमा आउँदासम्म बृद्धि भएर ३.३२ प्रतिशत पुगेको छ । यो वाणिज्य बैंकको इतिहासमै डरलाग्दो अवस्था हो । ५ प्रतिशत भन्दा बढि खराब कर्जा भए राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंक हस्तक्षेप गर्न सक्दछ ।
स्प्रेडदर घट्नु पर्नेमा बढ्यो
प्रतिशेयर आम्दानीमा गिरावटः
चुत्ता पुँजीमा १६ प्रतिशत बृद्धि भएको र खुद मुनाफामा ५ प्रतिशतको बुद्धि भएको कारणले गर्दा कम्पनकिो प्रति शेयर आम्दानीमा ९ प्रतिशतको बृद्धि भएको छ । कम्पनीको प्रति शेयर आम्दानी २४ रुपैया ३७ पैसा रहेको देखिन्छ । प्रभु गु्रप राम्रो संस्था भएपनि बैंक व्यवस्थापन टिमको बदमासी र असक्षमताले बैंक ओरालो लाग्दै गएको देखिन्छ । कर्मचारी भर्ना देखि कर्जा प्रवाहसम्म बैंक भित्र भएका बदमासीले प्रभु बैंक प्रभूको इच्छाबाट चलेको संकेत देखा पर्न थालेको छ । सचेत भया ।